SANN MAW: Part –7How to select mobile phone network operator for Myanmar? by Dr. Sann Maw
Part –7How to select mobile phone network operator for Myanmar? by Dr. Sann Maw
Part –7How to select mobile phone network operator for Myanmar?
ကျုပ်တုို့ ဒီအပို်င်းမှာတော့ ပြော ဖုို့ရန်ကျန်နေသေးတဲ့.. နံပါတ် ၄ direct assignment methods လိုင်စင်ချပေးတဲ့ နည်းနဲ့ အမှတ်ပေး စည်းမျည်း တွေ အကြောင်းကို ပြောကြရအောင်။
direct assignment methods ဆုိုတာက တော့ လွယ်လွယ်ပြောရရင်. လေလံဆွဲစရာ. ဝင်ပြိုင်စရာ မလုိုပဲ အထူးအခွင့် အရေးအနေနဲ့ ဦးစားပေးပီး ချပေးလိုက်တာမျိုးကို ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို ချပေးရာမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရသွားတဲ့ company အဖွဲ့ အစည်း အနေနဲ့.. လေလံကိုဈေးကြီးကြီး ပေးဆွဲစရာမလိုခြင်း..နဲ့ တခြားချွင်းချက် နဲ့ ဦးစားပေးခံရတဲ့ ကိတ်စတွေလဲ ရရှိနုိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ. ပြရရင်.. MPT နဲ့ ရတနာပုံတယ်လီ ပို့ ဆုိုတဲ့ ပြည်တွင်း company ၂ခုဟာ ခုအစိုးရကကျင်းပတဲ့ ပွဲ မှာ ဝင်ပြိုင်စရာ မလုိုဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ နံပါတ် ၄ နည်းလမ်း direct assignment methods ကို သုံးပီး လုပ်ပိုင်ခွင့် ချပေးလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ချပေးတာဟာ.. ဘယ်လို accessment criteria တွေနဲ့ ချပေးလိုက်တယ်ဆုိုတာတော့ သေသေချာချာ မသိရဘူး..သတင်း ထုတ်ပြန်တာ မတွေ့ရဘူး။ သူတုို့အနေနဲ့ radio spectrum bandwidth ကို တခြားနုိုင်ငံခြားက company တွေလို ပိုက် ဆံပေးဝယ်စရာလိုသလား.. နောက် customer service ကို ဘယ်လိုပုံစံကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးရမယ်။ ဆင်းကဒ် ဈေးနုန်း ဖုန်းဆက်ခ ဘယ်လောက်ယူရမယ် စတဲ့ အချက်တွေ လုိုက်နာဖုို့ လိုမလို ဆုိုတာတွေကို သေသေချာချာတော့ မသိရဘူး.. သတင်း ထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရဘူး. တချို့ နုိုင် ငံတွေမှာ ဆုိုရင်တော့ direct assignment methods နဲ့ ချပေးတာ ဆုိုပေမယ့်.. သူတို့ဟာ နုိုင်ငံခြားက..လာလုပ်တဲ့ company တွေ ပေးရတဲ့ radio frequency bandwith fee အတုိုင်း ပေးဆောင်စေပါတယ်။ ဥပမာ..ခု Telenor နဲ့.. Ooredoo က radio frequency bandwidth အတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၃ ထောင်ပေးရတယ်ဆုိုရင်.. MPT နဲ့ ရတနာပုံ တယ်လီပို့ လဲ အစိုးရကို အဲ့ဒီပမာဏ အတုိုင်း ပေးဆောင်စေခြင်းမျိုးပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် ခု direct assignment methods သုံးပီးချပေလိုက်တယ်ဆုိုတာပဲ သိရပီး. အဲ့ဒီ MPT နဲ့ ရတနာပုံ တုို့ရဲ့ radio frequency bandwidth licence fee ကိတ်စနဲ့ ပါတ်သက်လို့တော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု့ရှိတာ မတွေ့ရဘူးထင်တာပဲ။ OK ဒါကုို ထားလုိုက်ပီး
နောက် တချက် တင်ဒါ စည်းကမ်းချက် အမှတ်ပေးစည်းမျည်း ဆိုတာတွေကို ကြည့်ရအောင်။
နုိုင်ငံတကာက company ပေါင်း ၁၂ ခုရဲ့ pre-qualified list ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆုိုတာ အရင် အပိုင်းတွေ တုန်းက ပြောထားခဲ့တယ်နော် ။ ဟုတ်လား.. အဲ့ဒီ ၁၂ ခုကသာ.. ခုပြောပြမယ့် နောက် ဆုံး ဇကာတင် အဆင့် ဖြစ်တဲ့ Tender တင်သွင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုတင်သွင်းတဲ့အခါမှာ သိသင့် တဲ့ အမှတ်ပေးတဲ့ စည်းမျည်း စည်းကမ်းတွေက တော့ အောက်မှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးသိသင့်တာက.. အမှတ်ပေးတဲ့ အပိုင်း ကို အဓိက ၂ ပိုင်း ပိုင်းလုိုက်ပါတယ်။
ပထမပုိုင်းက technical submission evaluation လုို့ခေါ်ပါတယ်။ နည်းပညာ ကျွှမ်းကျင်မှုနဲပါတ်သက် တဲ့ အပိုင်းကို စဉ်းစားပီး အမှတ် ၁၀၀၀ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စု့စု့ပေါင်းအမှတ်ရဲ့ ၆၇% ရှိပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်း ကတော့ Spectrum Licence Fee Offer evaluation လုို့ခေါ်ပီး၊ သူ့ အတွက် က ကျတော့ radio frequency bandwidth အတွက် လိုင်စင်ကြေး အတွက် ပေးနိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏ ပါ။ ဒီအတွက်ကို တော့အမှတ် ၅၀၀ သတ်မှတ်ထားပီး စု့စု့ပေါင်း အမှတ်ရဲ့ ၃၃% ရှိပါတယ်။
တင်ဒါတင်တဲ့ company တွေ ဟာ ပထမပိုင်းအတွက် သူတုို့ရဲ့ကျွှမ်းကျင်မှု၊ နည်းပညာပိုင်ဆုိုင် အသုံးချနုိုင်မှုတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ၊ မြန်မာပြည်အတွက် မုိုဘုိုင်းဖုန်း network တပ်ဆင်ပေးမယ့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွေ၊ စတဲ့ ပထမပုိုင်းနဲ့ ပါတ်သက် တဲ့ Plan အသေးစိတ်ရေးဆွဲထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေရယ်။
နောက်ဒုတိယပိုင်းအတွက် လိုင်စင်ကြေးအတွက် ဘယ်လောက်ပေးနုိုင်သလဲဆုိုပီး ပေးနုိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏကို ရေးပီး စာအိတ်ထဲ ထည့်ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ စာအိတ်တလုံးစီ ရယ်ကို3June 2013 နေ့နောက်ဆုံးထားပီး အကဲဖြတ်ကော်မတီ ထံ အရောက်တင်သွင်း ရပါတယ်။ ဒီလိုတင်သွင်းတာကို လက်ခံပီးတဲ့နောက်မှာ ကော်မတီက အဆင့်၃ဆင့် ပါတဲ့ အကဲဖြတ်ချက်နဲ့ ဆက်လက်အကဲဖြတ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၁) ဆင့် မှာ ဘာတွေပါလဲ။
(၁) အစိုးရက လုိုင်စင်ချ၊ခွင့်ပြု့ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပီး ၉လအတွင်း ဖုန်းတွေစချပေးနုိုင်ရမယ်။
(၂) ၁နှစ် (လပေါင်း ၁၂ လ) အတွင်းမှာ ဖုန်းပြောတာအတွက် နုိုင်ငံရဲ့ ၂၅% သောဧရိယာအတွက် ချပေးနုိုင်ရမယ်၊ အင်တာနက် သုံးတာအတွက်က နိုင်ငံရဲ့ ၁၀% သော ဧရိယာ အတွက် ချပေးနုိုင်ရမယ်။
(၃) ၅နှစ် (လပေါင်း ၆၀) အတွင်းမှာ ဖုန်းပြောတာအတွက် နုိုင်ငံရဲ့ ၇၅% သောဧရိယာအတွက် ချပေးနုိုင်ရမယ်၊ အင်တာနက် သုံးတာအတွက်က နိုင်ငံရဲ့ ၅၀% သော ဧရိယာ အတွက် ချပေးနုိုင်ရမယ်။
(၄) ဧရိယာ အတုိုင်းအတာဆုိုရာမှာ နယ်တခုနဲ့ တခု လူနေထူထပ်တာ၊တောတောင် ထူထပ်တာပေါ်မူတည်ပီး ကွာခြားတဲ့အတွက် အထက်ကပြောခဲတဲ့ ရာခိုင်နုန်းတွေ လွှမ်းခြုံရမယ့် နေရာဒေသတွေဟာ ပြည်နယ် နဲ့တုိုင်းပေါ်မူတည်ပီး ပြောင်းသွားနုိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ပေးရရင်.. ကချင်ပြည်နယ် အတွက် လွှမ်းခြုံရမယ်ဆုို တဲ့ ဧရိယာမှာ ဆုိုရင် လူသူမနေတဲ့ တောင်ထိပ်ဖျားတွေ၊ တောအုပ်နက်နက်တွေ ကိုထည့်မစဉ်းစား ဘူးဆုိုတဲ့သဘောပေါ့။
(၅) နောက်သွားရင်းလာရင်းနဲ့ ဖုန်းပြောနေရင်းနဲ့လိုင်း ပြုတ်ကျသွားတဲ့ နုန်းဟာ အကြိမ် ၁၀၀ မှာ ဆုိုရင် ၂ ကြိမ်ထက် ပိုမဖြစ်ရဘူးဆုိုပီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ခုန company တွေက တင်သွင်းတဲ့ ပထမပိုင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ Technical submission evaluation စာရွက်စာတမ်းဟာ အဆင့်(၁) ပါ အချက် ၅ ချက်နဲ့မကိုက်ရင် မကိုက်တဲ့ company ကို အဆင့်(၂) မှာ ဆက်လက် မစဉ်းစားပါဘူး။ ကြားဖြတ်ပြောရရင်3June 2013 မှာ တင်ဒါလာသွင်းတဲ့ company ပေါင်း ၁၁ ခုရှိပီး၊ အဲ့ဒီ ထဲကမှ company ၁ခု က အဆင့် (၁) ပါအချက် ၅ချက် ကို မမှီလုို့ဆုိုပီး ပယ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆင့် (၂) ကို ဆက်လက် စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ company ပေါင်း ၁၀ ခု သာကျန်တော့တယ် လုို့သိရပါတယ်။
အဆင့် ( ၂ )
အဆင့် (၂) မှာ အချက် ကြီး (၈) ချက် ထပ်ခွဲထားတယ်ပြောပါတယ်၊ အဲ့ဒီအချက်ကြီး (၈)ချက်ကိုမှ တခါ အချက်ခွဲလေးတွေမြောက်များစွာထပ်ခွဲပီး စဉ်းစားတယ်ပြောပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး ဝက်ဘ်ဆုိုက်မှာတော့ အချက်ကြီး (၈) ချက်ကိုပဲ ဖေါ်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အောက်မှာ အချက်ကြီး (၈)ချက် ကို အမှတ်တွေနဲ့တကွ ဖေါ် ပြထားပါတယ်။ ဘာသာတော့ အတိအကျ မပြန်တော့ဘူးနော်၊ နည်းပညာ အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ဆုိုတော့ မြန်မာလို့ပြန်ရတာနဲနဲခက်လုို့ပါ။
▪ (1) Network roll-out, infrastructure and coverage commitment (325 points); ဖုန်းတပ်ဆင်မှု နဲ့ ကာဗာ ဖြစ်မှု ၃၂၅ မှတ်
▪ (2) Robustness of technical plan (125 points); နည်းပညာ ရဲ့ အရည်အသွေး နဲ့ ကြံကြံခံမှု ၁၂၅ မှတ်
▪ (3) Quality of marketing plan, value added services and distribution commitment (125 points); ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမယ်ပုံစံ။ ထပ်ဆင့်အသုံးချနုိုင်မှု ၁၂၅ မှတ်
▪ (4) Tariff commitment for mobile voice services, for mobile data services and for handsets (75 points); ဈေးနုန်း ခေါ်ဆုိုခ၊ ဟန်းဆက်ခ အစရှိသည် ၇၅ မှတ်
▪ (5)Human resources management, organisation and capabilities, including the applicant's commitment to recruit, develop and promote citizens of the Republic of the Union of Myanmar (75 points); နုိုင်ငံတွင်းလူများ အတွက်ဘယ်လိုအကြိုးပြုမလဲ။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းစသည် ၇၅မှတ်
. (6) Quality of customer care and billing plan (50 points); သုံးစွဲသူ အတွက်ဝန်ဆောင်မှု ၅၀ မှတ်
. (7) Corporate Social Responsibility, including the commitment of the applicant to contribute to the development of ICT or the local inclusion development plan (50 points); and လူမှုရေး အဖွဲအစည်း။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးပြု့သလဲ။ ၅၀မှတ်
. (8) Soundness of business plan and financing strategy (175 points). ငွေကြေးအစီအမံ အကြံအစီ..ကောင်းမွန်မှု စသည် စသည်ပေ့ါ။ ၁၇၅ မှတ်
အထက်ပါ အဆင့် (၂) ရဲ့ အဓိက အချက် ကြီး(၈)ချက် အတွက် ရမှတ် စု့စု့ပေါင်း ၅၀၀ နဲ့အထက် ရရှိတဲ့ company တွေကို အဆင့် (၃) မှာ ဆက်လက်စဉ်းစားပါမယ်တဲ့။
အဆင့် ( ၃ )
ဆိုတော့ ဆက်ရရင်.. အဆင့် ၃ မှာ လိုင်စင် အတွက် အစိုးရ ကို ပေးနိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏ ကို ဆက်လက်ကြည့်ပါမယ်.. ဒီအဆင့် ကို ရောက်ဖို့အတွက်..အဆင့်(၂) မှာ ပေးတဲ့ အမှတ် ၁၀၀၀ မှာ အမှတ်ပေါင်း ၅၀၀ အနည်းဆုံးရဖို့ လိုပါတယ်.. အမှတ် ပေါင်း ၅၀၀ မရတဲ့ company ကို ဒီအဆင့် ၃ မှာ ဆက်လက် မစဉ်းစားပါဘူး. .မစဉ်းစားဆို.. အဲ့ဒီ company တွေရဲ့..ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ စာအိတ်ထဲက.. လိုင်စင်အတွက် ငွေဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုတာ ကို ပါ ဖွင့်ဖေါက်မဖတ်တာ လို့သိရပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဆင့် (၂) ကို အောင်လာတဲ့ company ပေါင်း ၅ ခုရှိလာပါတယ်။ ပီးတော့မှ ဒီအဆင့် အတွက် အမှတ် ၅၀၀သတ်မှတ်ထား ကနေ.. လိုင်စင်ကြေးပေးမယ့် ငွေကြေးပမာဏပေါ်မူတည်ပိး.. တာကနေ..သင့်တော်တဲ့ အမှတ်ကို ပေးပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ..ပထမပိုင်း အတွက် အမှတ် ၁၀၀၀ ထဲက ရခဲ့တဲ့ အမှတ်ရယ် ။ ဒုတိယပိုင်း အတွက် သတ်မှတ်တဲ့ အမှတ် ၅၀၀ ထဲက ရခဲ့တဲ့ အမှတ် ၂ မျိုးရယ်ကို ပေါင်းလိုက်ပီး..အမှတ် အများဆုံးရ ခဲ့..ထိပ် ဆုံး company ၂ ခု ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင် ချပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တတိယ အမှတ်အများဆုံး company ကတော့ backup company ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ.. တကယ်လို့..ခု န ချပေးတဲ့ company ၂ခု ထဲက..တခုခု က ဆက်လက် လုပ်ဆောင် နိုင်ခြင်း မရှိတော့ရင် backup company ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် လွှဲပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တချို့ online မှာ ပြောနေ ရေးနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ company တချို့ဟာ ဒီအမှတ်သတ်မှတ် ချက်တွေကို ကြို သိနေလို့.. အဲ့ဒါနဲ့ကိုက်အောင် ရေးဆွဲပီး တင်သွားတယ် လို့ ပြောပါတယ်။ ကျုပ်စိတ်ထင်ကတော့ ဒီအမှတ်သတ်မှတ်ချက် ဆိုတာ ဟာ စာရွက်စာတမ်းတွေ..မတင်ခင်ကတည်းက..သက်ဆိုင်ရာ company တွေကို ကြိုအသိပေးခဲ့တယ်လို့ ထင်တာပဲ..အဲ့ဒါကိုတော့ဆက်သွယ်ရေး ဝက်ဆိုက်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖေါ်ပြထားတာ မတွေ့မိပါ.. စာဖတ်သူများ တွေ့မိရင်..ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ.. ဒီအမှတ်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်အောင်.. ရေးဆွဲပီး တင်တဲ့ company ဟာ စာ၇ွက်ပေါ်မှာ တင်.. ရေးပြရုံနဲ့ပီးမသွားပါဘူး. လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ ဥပမာ ပြောရရင်.. ဖုန်းဆက် ခ တမိနစ်ကို ၂၀ကျပ် ယူမယ်ဆိုပီး တင်ထားတယ်ဆိုပါက.. တကယ်ရောင်းချတဲ့ အခါမှာ တမိနစ် ကို ၂၀ကျပ်ထက် ပိုပီး ယူလို့မရပါ.. လျော့ယူရင်သာ ယူလို့ရမယ်။ နောက် တချက် ပထမ ၁ နှစ်အတွင်း တနိုင်ငံလုံး ရဲ့ ၅၀% ကို ဖုန်းရောင်းချပေးမယ် လို့..တင်ထားတယ်ဆိုပါက.. အဲ့ဒီအတိုင်း တကယ် လက်တွေ့ ရောင်းပေးရပါမယ်။ တကယ်လို့ စာရွက်ပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ အတိုင်း လက်တွေ့မှာ လုပ်ဆောင် နိုင်ခြင်း မရှိတာ ။ အပြောတမျိုး၊ အလုပ်တမျိုး လုပ်လာတာ တွေ့ရတယ် ဆိုရင်.. အစိုးရအနေနဲ့.အဲ့ဒီလိုလုပ်လာတဲ့ company ကို ဒါဏ်ရိုက်တာတွေ.. ပိုဆိုးလာရင်. ခုနက backup သတ်မှတ်ထားတဲ့ company ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် လွှဲပေးတာတွေ.. လုပ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ဆုံး ကောက်ချက် ဆွဲရရင် ခု လိုင်စင်ချပေးလိုက်တဲ့ ကိတ်စ ဟာဆိုရင်ဖြင့် ဟိုးအရင်တုန်းက.. အစိုးရပိုင် စက်ရုံတွေ..မြေကွက်အလွတ်တွေ..ရုံးတွေကို ခရိုနီတွေ နဲ့ ပေါင်းရိုက်ပီး..အောက်ဈေးနဲ့ ချပေးလိုက်တာ မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ ပြောနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား.. ကျုပ်တယောက်ထဲ အမြင် ပြောရရင်ဖြင့်.. မြန်မာပြည်ထဲက.. တချို့သော ခရိုနီ တွေနဲ့.. ပူးပေါင်းထားတဲ့.. စု့ပေါင်း အဖွဲ့တွေ ရသွားတာနဲ့ စာရင်.. နိုင်ငံခြား company ချည်းသက်သက် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရသွားတာက ပိုပီး ကောင်းမွန်တယ်လို့ ယူဆမိကြောင်းပါ ခင်ဗျား။ ။
နောက်တပိုင်းတွင် ဆက်လက်ပီး.. ဖုန်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုသတင်းများ လုံခြုံစိတ်ချရမှု ရှိနိုင် မရှိနိုင်။ နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို နိုင်ငံခြား company မှရယူသွားနိုင် သလားဆိုတာကို ဆက်လက် သုံးသပ်တင်ပြပါ့မယ် ခင်ဗျား။
Posted by Admin at Wednesday, July 03, 2013
Part –7How to select mobile phone network operat...